Lupyo News - Page 231 of 239 - News and Media
၀မ်းသာစရာ သတင်းကောင်းလေးပါဗျာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်ပျောက်ဆေး အောင်မြင်ပြီတဲ့….
April 17, 2020 by Lupyo News
၀မ်းသာစရာ သတင်းကောင်းလေးပါဗျာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်ပျောက်ဆေး အောင်မြင်ပါပြီ ဝူဟန်ရောဂါကုသဆေးကို ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်တွင်လက်တွေ့စမ်းသပ်နေရာ ဆီလီကွန်ဗယ်လီရှိ Gilead Sciences ကုမ္မဏီမှထုတ်လုပ်သောဆေး Remdesivir အမည်ရှိဆေးဖြင့် လူနာ၁၂၅ယောက်ကို နေ့စဉ်ထိုးပေးကုသရာ ၂ ယောက်မှလွဲ၍ အားလုံးဆေးရုံက ရောဂါပျောက်ကင်း ဆင်းကြရကြောင်း တက္ကသိုလ်ဆေးရုံက ကြေညာပါသည်။ ကမ္ဘာကြီး နေပြန်ကောင်းတော့မှာပါ…မကြာတော့ပါဖူးဟ လူသားတွေကြံရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်… နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာသတင်းတွေချည်းပဲကြားနေရတယ် အားလုံး ညီညီညာညာနဲ့ ခွန်အားရှိရှိနဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ တိုက်ထုတ်ရင် ဒီကပ်ဆိုးကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ… လောလောဆယ်တော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမှာ ပြည်သူတွေတာဝန်ပါ မကြာခင် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး လွတ်မြောက်ကြတော့မှာပါ ကပ်ရောဂါကြီး ပီးဆုံးသွားတဲ့တစ်နေ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အရင်လိုပျော်မယ် အရင်လို အလုပ်ခွင်ဝင်ပီး ပိုက်ဆံရှာကြမယ် တစ်နေကုန် အိမ်မကပ်ပဲ လျှောက်လည်ကြမယ်လေ အားလုံးသဘောတူကြလား? တူတယ်ဆိုရင် … Read more
မြဝတီမြို့က ဖာရုံတွေ မပိတ်လို့ မြဝတီမြို့ခံတွေက ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီး ရုပ်သံ
မြဝတီမြို့က ဖာရုံတွေ မပိတ်လို့ မြဝတီမြို့ခံတွေက ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီး ရုပ်သံ ကိုရိုနာကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေချိန်မှာ အခုလို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေ ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတာဟာလည်း အရမ်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ပြည်သူတွေက မနေနိုင်တဲ့အဆုံး ကိုယ်တိုင်ဖမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့သိက္ခာလည်းကျသလို ရပ်ကွက်ထဲကပြည်သူတွေလည်း အရမ်းသိက္ခာကျရပါတယ်။ ဖာသည်မတွေလည်းမိတယ်၊ ကွန်ဒုံးတွေနဲ့ ဖာရုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်း အကုန်မိပါတယ်။ မြဝတီမြို့ အမှတ်လေးရပ်ကွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာမတွေကိုတို့ သူတို့အရှက်သိက္ခာအတွက် ရိုက်မပြဘူးလို့လည်း လိုက်ဖ်လွှင့်သူကပြောပါတယ်။ မြဝတီရဲစခန်းကလည်း ဖုန်းခေါ်အကူအညီတောင်းပေမယ့် ဖုန်းကိုမကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ပြည့်တန်ဆာရုံဆိုတာ လူဆိုလူမိုက် လူ့ဗာလတို့ သွားလာပျော်ပါးရာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာဟာ ဖမ်းဆီးပေးတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များလွန်းပါတယ်။ ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကိုလည်း မြဝတီသူမြဝတီသားတွေရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာတွေကို အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ မြင်တွေ့နိုင်စေဖို့ ရှဲပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံသလို တာဝန်ရှိသူများ အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဗျာ ကိုရိုနာကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေချိန်မှာ အခုလို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေ … Read more
သတင်းကောင်းပါ လူနာအမှတ် ၃ နဲ့ အမှတ် ၉ NEGATIVE နှစ်ခါဖြစ်ပြီ
သတင်းကောင်းပါ လူနာအမှတ် ၃ နဲ့ အမှတ် ၉ NEGATIVE နှစ်ခါဖြစ်ပြီ သတင်းကောင်းပါ။အင်္ဂလန်မှပြန်လာတဲ့ အင်းစိန်က အသက် ၂၆နှစ် အမျိုးသား လူနာအမှတ်-၃ နဲ့ မြဝတီနယ်စပ်မှ ပြန်လာတဲ့ မင်္ဂလာဒုံက အသက် ၄၄နှစ် အမျိုးသား လူနာအမှတ်-၉ တို့ကို ရောဂါပြန်စစ်တဲ့အခါ (၂)ခါတိတိ Negative ပြပြီဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးက ပြောကြားလိုက်တာပါ။ လူနာအမှတ်-၁၅က SOS ဆေးခန်းက သူနာပြုဆရာမလဲ မကြာခင်ထပ်စစ်တော့မှာဆိုတော့ သူလဲ Negative ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးရဲ့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှာ ကုပေးနေရတဲ့ လူနာအမှတ်-၂၆ကလဲ ရောဂါအခြေအနေတိုးတက်လာပြီး ICU ခန်းထဲကနေ ထွက်လာနိုင်ပြီလို့ သိရှိရပါတယ်။ ယနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၄)ဦး သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်လူနာများအားလုံးရဲ့ … Read more
မြို့သားတွေကို ပိုက်ဆံထုတ်ကိုင်ပြပြီး ဒဲ့ဖြဲလိုက်တဲ့ တောသားတစ်ယောက် ဗီဒီယိုဖိုင်….
မြို့သားတွေကို ပိုက်ဆံထုတ်ကိုင်ပြပြီး ဒဲ့ဖြဲလိုက်တဲ့ တောသားတစ်ယောက်…. တောသားနဲ့မြို့သားဆိုတာ ခုမှမဟုတ်ပါဘူး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ အမြဲလိုလိုပြိုင်ဆိုင်စနောက်ရန်ဖြစ်နေကြတာပါ…။ လူငယ်တစ်ချို့က အပျော်သဘောဆိုပေမယ့် တချို့ကတော့ မခံချင်စိတ်နဲ့ဆဲဆိုမှု့တွေပါ ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်… တစ်ခါတုန်းကလဲ မြို့သားတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကလဲ ဆန်မစားဘူးဆိုပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ပလူပြန်နေအောင်ဆဲဆိုလိုက်ကြပါသေးတယ်.. ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မက်အလှူရှင်တွေကိုလည်း အပြစ်တင်၊ ဆင်းရဲသားတွေကိုလည်းလှောင်ပြောင်အပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကြောင့် အွန်လိုင်းမှာ ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တစ်ကယ် အခုလို အဖက်ဖက်က အဆင်မပြေဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံး နေကြရမယ့်အချိန်ပါ။ လူငယ်တစ်ယောက်က အခုလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ပြုမူပြောဆို အဆင့်အတန်းခွဲလာမြင်ရတော့ စိတ်ထဲမကောင်းပါ။ ဆင်းရဲတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်သလို နှိမ်စရာလည်း မလိုပါ။ စာရိတ္တမကောင်းတာသာ ရှက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ တောသားမြို့သားလဲ ခွဲခြားစရာမလိုပါ…. အခုတောသားကတော့ ပိုက်ဆံထုပ်အများကြီးကိုင်ပြီး မြို့သားတွေကို ကြွားလိုက်တာပါ….။ အခုတလောမှာလဲ ကိုရိုိနာကပ်ရောဂါကာလမှာ မန်းလေးက … Read more
လူတွေကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါရှိ မရှိ ထောက်လှမ်းစမ်းသပ်ပေးမယ့် မျက်မှန်…
လူတွေမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရှိမရှိ ထောက်လှမ်းပေးမယ့် မျက်မှန်…။ ဒီမျက်မှန်ကိုတော့ Hangzhou မြို့အခြေစိုက် တရုတ်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Rokid က ထုတ်ပါတယ်။ Rokid ဟာ သူရဲ့ ဒီ T1 မျက်မှန်တွေကို ရောင်းချဖို့အတွက် အမေရိက ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကို ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ Rokid ရဲ့ T1 ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းမျက်မှန်ဟာ ၃ မီတာအတွင်းက လူအယောက် ၂၀၀ ကို ၂ မိနစ်အတွင်း ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ T1 မျက်မှန်ဟာ လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို တိုင်းတာဖို့အတွက် Infrared Sensor ကို အသုံးပြုထားပါတယ်…။ CPU အနေနဲ့ Qualcomm ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ကင်မရာကတော့ 12 MP ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးဖို့ လက်နှိပ်စရာမလိုပဲ … Read more
အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင် (ICU) ထဲမှာ ကိုဗစ်လူနာ မရှိတော့ပဲ အလားအလာကောင်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်…
မနေ့ညကတော့ စိတ်နည်းနည်း သက်တောင့်သက်သာရှိသလိုပဲ.. ည ၈ နာရီမှာ အားလုံးက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ စုပေါင်းလက်ခုတ်တီးပေးကြတယ် ဝမ်းသာမိတယ်… ပထမအသုတ်၊ ဒုတိယအသုန် ၂၆၉ ဦးကလဲ တစ်ယောက်မှ ပိုးမတွေ့လို့ အားလုံး Negative.. နောက်ပြီး ဒီနေ့ ဝေဘာဂီ ICU ကလူနာ နံပါတ် ၂၆ သက်သာလို့ အပြင်ခန်းရွှေ့ပြီ.. ခုဆို အထူးကြပ်မတ်ကုသပေးနေရသူ မရှိတော့ဘူး… ကိုဗစ်လူနာစုစုပေါင်း ၈၅ ယောက်မှာ နှစ်ယောက် လူနာအမှတ် (၄) နဲ့ (၇) က ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရပြီးတာကြာပြီ.. နောက်ထပ်နှစ်ယောက် လူနာအမှတ် (၃) နဲ့ (၉) က Negative နှစ်ခါ ဖြစ်သွားပြီ.. လူနာအမှတ် (၁၅) ကလဲ မကြာခင်မှာ စတုတ္ထအကြိမ် … Read more
April 16, 2020 by Lupyo News
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညကြောင့် နောက်နေ့ နေ့လည်ထိ အပြင်ကို မထွက်နိုင်တော့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အဖြစ်ပျက် ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား…” “မထကြသေးဘူး…” “ကျနော်တွေးမိတာကတော့…” “ကိုယ့်ဖာသာ စားမှာကိုမြန်မြန်စားစမ်းပါဟာ…။ တော်ကြာကျောင်းနောက်ကျနေအုန်းမယ်…” ဒီလိုနဲ့ မောင်ရွှေအေးလဲ မနက်စာစားပြီး ကျောင်းထွက်သွားပါတယ်…။ မုန့်စားကျောင်းဆင်းတော့ ကျောင်းနဲ့အိမ်က နီးနေတဲ့အတွက် မောင်ရွှေအေးက အိမ်ပြန်လာပြီး ထမင်းစားလေ့ ရှိပါတယ်…။ ထမင်းစားနေရင်း ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ အမေကို… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား…” … Read more
COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပဒေအရ ဘယ်လို အရေးယူမယ်ဆိုတာ ယနေ့ညထုတ်ပြန်မယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံပြော ….
COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပဒေအရ ဘယ်လို အရေးယူမယ်ဆိုတာ ယနေ့ညထုတ်ပြန်မယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံပြော …. ယခု COVID-19 ရောဂါကူးစက် ထားသူ (၈၅) ဦး တွေ့ရှိထားပါပြီ။ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေလည်း ပိုမို ထင်ရှား၊ တိကျစွာ ပေါ်လွင် လာပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံး ကတော့ အခြေအနေတွေကို အားလုံးရှင်းလင်းစွာ နားလည်ဖို့ လိုအပ် ချက် ပါပဲ။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းနဲ့ စပါမယ်။ ဘယ်ဥပဒေအရ၊ ဘာလုပ်သူကို ဘယ်လို အရေးယူမယ်ဆိုတာ ဒီညထုတ်ပြန် ပါမယ်။ အားလုံး အတွက် တစ်ပြေးညီ၊ မှန်ကန် မျှတစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်း မာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ကိုလည်း ရပ်ရွာထဲမှာ … Read more
မန္တလေးက COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ လူနာနံပါတ် – (၈၂)ရဲ့ ပြောပြလာချက်…၊ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေ…
ဒီ ၈၂ က ကျွန်မပါ… ပြန်တော်ပြန်ဝင်လာကတည်းကMyanmar Life Hotel မှာ Q 14 ရက်နေပါတယ်အိမ်ပြန်လာတော့လည်းအိမ်မှာ အခန်းသီးသန့်နဲ့Q ထပ်နေပါတယ်…။ အိမ်မှာ မိဘ တူ တူမ မောင်နှမများလည်းမထိတွေ့အောင် နေပါတယ်သူတို့နဲ့ စကားပြောရင်လည်း အဝေးကနေ Mask အမြဲတပ်ပြီးပြောပါတယ်…။ အိမ်မှာနေပြီ သိပ်မကြာဘူးLoss smell and taste ဖြစ်လို့ရပ်ကွက်ကျန်းမာရေးကို အသိပေးပြီးဆေးရုံကြီးကနေ Q centerကိုထပ်နေပါတယ်…။ ဒီနေ့ အဖြေသိရပါတယ်။နေထိုင် စားသောက်ရတာအားလုံးကောင်းပါတယ်…။ ဖျားလည်း မဖျားဘူး ချောင်းလည်းမဆိုးဘူးစိတ်ဓါတ်လည်းမကျပါဘူး…။ အနံ အရသာ ပျောက်သွားတာ တစ်ခုပါပဲ။စိတ်ပူပြီးမေးတဲ့ သူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။ Ma Thwe unicode ဒီ ၈၂ က ကြှနျမပါ ပွနျတျောပွနျဝငျလာကတညျးကMyanmar Life Hotel မှာ … Read more
မင်းရာဇာအိမ်မွာ အိမ်အကူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးငယ်အတွက် လှူဒါန်းငွေ အခိုးခံရ…
မင်းရာဇာအိမ်မှာ အိမ်အကူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်အတွက် လှူဒါန်းငွေ အခိုးခံရ…. သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာနေအိမ်မှာ အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်ဟာ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ၊ မိန်းမကိုယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မြောက်ဥက္ကလာ မေဓာဝီဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတာပါ…. video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘယ်လိုလူယုတ်မာတွေလဲကွာ… ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာနေပါလား။ ကံကိုကဆိုးလွန်းပါတယ် သမီးလေးရယ်…။ ၀ဠ်ကြွေးတေက ဆပ်လို့ကို မကုန်နိုင်သေးပါလား? စိတ်မကောင်းလိုက်တာ သမီးလေးတို့ မိသားစုရယ်… ၀ဠ်ကြွေးတွေ အမြန်ဆုံးကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…. ခုဆိုရင်လဲ သမီးငယ်လေးဟာ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ၊ မိန်းမကိုယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ မြောက်ဥက္ကလာ မေဓာဝီဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတာပါ ဒါဏ်ရာတွေ အမြန်ပျောက်ကင်းပီး ပုံမှန်အတိုင်း ဘဝကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် လေးစားစွာဖြင့် —- ပေသီး video Credit – dvb မငျးရာဇာအိမျမှာ အိမျအကူလုပျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးငယျအတှကျ လှူဒါနျးငှေ အခိုးခံရ သရုပျဆောငျမငျးရာဇာနအေိမျမှာ … Read more
← Previous Page1 … Page230 Page231 Page232 … Page239 Next →